घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » यदि यो तपाइँको प्रेस विज्ञप्ति हो भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस्! » क्यान्सर र कोभिड अनुसन्धान: साइटोकिन्सको भूमिका
नोबेल पुरस्कार र ताङ पुरस्कार विजेता प्रो. टासुकु होन्जोले नोभेम्बर २६, २०२० ताङ प्राइज विजेताको बायोफेस्युटरको लागि 14 औं एशिया प्यासिफिक फेडेरेसन अफ फार्माकोलॉजिस्ट सम्मेलन (APFP) मा दिएका प्रेरणादायक उद्घाटन भाषण पछि, "क्यान्सर इम्युनोथेरापीको भविष्यको दृष्टिकोण"। ताइवानको ताङ प्राइज फाउन्डेसन र द फार्माकोलोजिकल सोसाइटीद्वारा सह-आयोजित विज्ञान, नोभेम्बर २७ मा दिउँसो १:३० बजे (GMT+26) १४औं एपीएफपीमा भयो।
ताइपेई मेडिकल युनिभर्सिटीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरका अध्यक्ष डा. वेन-चांग चाङ र ताइपेई मेडिकल युनिभर्सिटीका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. युन येनद्वारा सह-आयोजन गरिएको, यो विशेष सत्रमा बायोफार्मास्युटिकल विज्ञानमा २०२० ताङ पुरस्कारका लागि तीन जना विजेताहरूले दिएका व्याख्यानहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। , डा. Charles Dinarello, Marc Feldmann, र Tadamitsu Kishimoto, cytokines को सूजन र COVID-2020 रोगको साथै सम्भावित उपचारहरूमा खेल्ने भूमिकाको बारेमा बहुमूल्य जानकारी प्रदान गर्दै।
डा. डिनारेल्लोको पहिलो व्याख्यान, "इन्टरल्युकिन-१: द प्राइम मेडिएटर अफ सिस्टेमिक एन्ड लोकल इन्फ्लेमेशन" सन् १९७१ मा मानव सेतो रक्त कोशिकाबाट ल्युकोसाइटिक प्रायोजेन शुद्धीकरणबाट सुरु भयो। त्यसपछि उनलाई दुईवटा ज्वरो पहिचान गर्न छ वर्ष लाग्यो। अणुहरू उत्पादन गर्दै, पछि IL-1α र IL-1971β नाम दिइयो। 1 मा, अनुसन्धान परिणामहरू नेशनल एकेडेमी अफ साइन्सेजको कार्यवाहीमा प्रकाशित भएका थिए, र डा. दिनारेलोका लागि, "यो साइटोकाइन जीवविज्ञानको इतिहासमा एक महत्त्वपूर्ण कदम थियो," किनभने जीवन विज्ञानको क्षेत्रमा धेरै मानिसहरूलाई प्रोत्साहित गरिएको थियो। मानव शरीर विज्ञान मा प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभाव को अध्ययन। फलस्वरूप, साइटोकाइन जीवविज्ञान द्रुत रूपमा विस्तार भयो। उनले यो पनि कुरा गरे कि कसरी मानवमा प्रारम्भिक प्रयोगहरू पछि, "उपचारको रूपमा प्रयोग भइरहेको साइटोकाइनहरूको इतिहास नाटकीय रूपमा परिवर्तन भयो," र फोकस "इनहिबिटिङ साइटोकाइन्स, जस्तै IL-1, जस्तै TNF, जस्तै IL- मा सारियो। ६।" श्रोताहरूलाई IL-1977 परिवारको प्रो-इन्फ्लेमेटरी अणुहरू द्वारा गठन गरिएको जटिल नेटवर्क बुझ्न मद्दत गर्न, डा. दिनारेलोले IL-1 परिवारका सदस्यहरूको सिग्नल ट्रान्सडक्सन, तिनीहरूको प्रो- र एन्टी-इन्फ्लेमेटरी विशेषताहरू, र लक्षणहरू बारे विस्तृत वर्णन गरे। विभिन्न भडकाऊ रोगहरू, ताकि श्रोताहरूलाई व्याख्यानको दोस्रो भागको राम्रोसँग बुझ्नको लागि सजिलो होस् जुन "Il-6 नाकाबन्दीको क्लिनिकल अनुप्रयोग" मा केन्द्रित थियो। IL-1 अत्यधिक उत्पादन, जस्तै डा. दिनारेलोले टिप्पणी गरे, धेरै रोगहरूको एक सामान्य कारण हो। IL-1Ra, अर्कोतर्फ, Il-1αandβ लाई रोक्न सक्छ, र IL-1R संकेतलाई रोक्छ। Anakinra, एक recombinant मानव IL-1Ra उत्पादन गरिएको छ। यो रुमेटोइड गठियाको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ र टाइप 1 मधुमेहमा ग्लाइसेमिक विकारहरू पनि रोक्न सक्छ। यसबाहेक, Canakinumab, नोभार्टिसद्वारा सफलतापूर्वक विकास गरिएको एन्टी-IL-1β मोनोक्लोनल एन्टिबडी, दुर्लभ वंशानुगत रोगहरू, बाथ रोगहरू, अटोइम्यून र सूजन रोगहरू, हृदय रोगहरू सम्मका विभिन्न रोगहरूमा अनुमोदन गरिएको छ। Canakinumab समावेश गर्ने सबैभन्दा रोमाञ्चक समाचार क्लिनिकल परीक्षण, CANTOS हो, जसले क्यान्सरको उपचारमा canakinumab को महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भनेर अप्रत्याशित रूपमा प्रमाणित गर्‍यो। तसर्थ, डा. डिनारेल्लो विश्वास गर्छन् कि IL-1 लाई रोक्दा क्यान्सरको नयाँ उपचारको सुरुवात हुन सक्छ।
दोस्रो वक्ता, डा. फेल्डम्यानले "अटोइम्युनिटी इन इफेक्टिभ थेरापीमा आणविक अन्तरदृष्टि अनुवाद" मा आफ्नो विचार साझा गर्नुभयो। उनको व्याख्यानको पहिलो भागमा जोड दिइएको थियो कि उनले कसरी पत्ता लगाए कि एन्टि-टीएनएफले रुमेटोइड गठियाको उपचारमा प्रभावकारी हुन सक्छ। यस औषधिको उच्च वा कम खुराकको व्यवस्थापनले TNF लाई रोक्न सक्छ जबकि अन्य भडकाऊ मध्यस्थहरूको उत्पादनलाई पनि द्रुत रूपमा घटाउँछ। तिनीहरूको अघिल्लो प्रयोगहरूमा, डा. फेल्डम्यान र उहाँको टोलीले रुमेटोइड गठिया भएका करिब 50% मानिसहरूले एन्टी-टीएनएफ र क्यान्सर औषधि मेथोट्रेक्सेट प्रयोग गरेर संयोजन थेरापीमा प्रतिक्रिया देखाएका थिए। यसले उनलाई विश्वास गरायो कि "हरेक बिरामी निको हुनु अघि हामीले धेरै लामो बाटो तय गरेका छौं।" वार्ताको दोस्रो भागमा, डा. फेल्डम्यानले हामीलाई जानकारी दिनुभयो कि "TNF एक धेरै असामान्य ध्यान हो, किनभने यसको दुई फरक लक्ष्यहरू छन्: TNF रिसेप्टर-1 (TNFR1), जसले सूजनलाई ड्राइभ गर्छ, र TNF रिसेप्टर 2, जसले धेरै काम गर्दछ। विपरीत। त्यसोभए यदि तपाइँ सबै TNF ब्लक गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ रिसेप्टरहरू ब्लक गर्नुहुन्छ। तपाईंले सूजनलाई रोक्नुहोस्, तर तपाईंले सूजनलाई कम गर्ने शरीरको प्रयासलाई पनि रोक्नुहोस्। ” त्यसकारण, उहाँ र उहाँका सहकर्मीहरू "उपकरणहरू उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा" छन् र नियामक T कक्षहरूको कार्य परिवर्तन नगरी पहिले नै TNFR1 अवरुद्ध गरिसकेका छन्। थप रूपमा, डा. फेल्डम्यानले हत्केलामा एन्टि-टीएनएफ इन्जेक्सन गरेर हातको फाइब्रोसिसको उपचार जस्ता धेरै अपूर्ति चिकित्सा आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न एन्टि-टीएनएफको सम्भाव्यता उल्लेख गरे। यद्यपि, उनले एन्टि-टीएनएफका दुई स्पष्ट हानिहरूलाई औंल्याए जुन उनले पहिलो पटक विकास गरेका थिए: यो लागत-प्रतिषेधात्मक थियो र "यो एक इंजेक्शन योग्य औषधि थियो।" तसर्थ, "मुखबाट डेलिभर गर्न सकिने सस्तो औषधिहरू" विकास गर्नाले समाजलाई ठूलो फाइदा पु¥याउनेछ। सम्पूर्ण व्याख्यानमा, डा. फेल्डम्यानले विभिन्न परियोजनाहरू र प्रयोगहरूका लागि आफू भएको वा सहयोग गरिरहनुभएको धेरै मानिसहरूलाई ल्याइरहे, किनकि उनले यी अनुभवहरूबाट आफूले सिकेका कुराहरू "अरूसँग कसरी प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने" भन्ने सन्देश घरघरमा पु¥याउने प्रयास गरे। उनीहरूको अनुसन्धानमा निरन्तर सफलताहरू सुनिश्चित गर्न। "हामी एक्लैले गर्न सक्ने भन्दा धेरै" हासिल गर्न "उनीहरूसँग काम गर्नका लागि प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू," र "उनीहरूसँग मिलेर" खोज्नु उनको क्यारियरको विशेषता हो।
“Interleukin-6: Arthritis from CAR-T and COVID-19” शीर्षकमा तेस्रो व्याख्यान प्रस्तुत गर्दै डा. किशिमोटोले IL-6 कसरी पत्ता लगाइयो, IL-6 किन प्लियोट्रोपिक अणु हो र किन भन्ने विषयमा श्रोताको ध्यानाकर्षण गराए। IL-6 "दुबै एन्टिबडी उत्पादन र साथै सूजन प्रेरणाको लागि जिम्मेवार छ।" उनले IL-6 को अटोइम्यून रोगहरूमा पार्ने प्रभावहरू र कसरी IL-6 ले साइटोकाइन आँधीहरू ट्रिगर गर्न सक्छ भन्ने बारेमा पनि प्रकाश पारे। आफ्नो भाषणको सुरुमा, डा. किस्टिमोटोले स्पष्ट गरे कि IL-6 को अत्यधिक उत्पादन धेरै रोगहरूसँग सम्बन्धित छ, जस्तै कार्डियक माइक्सोमा, क्यासलम्यान रोग, रुमेटोइड गठिया, र किशोर इडियोपैथिक गठिया (JIA) को प्रणालीगत शुरुआत। IL-6 अत्यधिक उत्पादनले उत्तेजित भडकाउने प्रतिक्रियाहरूलाई सम्बोधन गर्न, डा. किशिमोटो र उनको टोलीले IL-6 संकेतहरू अवरुद्ध गरेर बिरामीहरूको उपचार गर्ने प्रयास गरे। त्यसपछि, टोसिलिजुमाब, एक पुन: संयोजक मानवीकृत एन्टी-IL-6 रिसेप्टर मोनोक्लोनल एन्टिबडी, सफलतापूर्वक विकसित गरियो र 100 भन्दा बढी देशहरूमा रुमेटोइड गठिया र JIA को उपचारको लागि प्रयोगको लागि अनुमोदन गरिएको छ। IL-6 को उत्पादन कसरी नियमन गरिन्छ र किन IL-6 अत्यधिक उत्पादन दीर्घकालीन सूजन रोगहरूमा हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा, डा. किशिमोटोले बताए कि IL-6 को स्थिरता यसको मेसेन्जर आरएनएमा पूर्ण रूपमा निर्भर छ। CAR-T सेल-प्रेरित साइटोकाइन आँधीबाट पीडित बिरामीहरूलाई बचाउन, चिकित्सा पेशामा धेरैले अब यो थेरापीको साइड इफेक्टहरू कुशन गर्न टोसिलिजुमाब प्रयोग गर्नेछन्। यस उदाहरणलाई ध्यानमा राख्दै, डा. किशिमोटो र उनको टोलीले अनुमान लगाए कि टोसिलिजुमाबले गम्भीर रूपमा बिरामी COVID-19 बिरामीहरूलाई साइटोकाइन आँधीहरूसँग लड्न मद्दत गर्न पनि प्रभावकारी हुन सक्छ। धेरै ठूला-ठूला क्लिनिकल परीक्षणहरूले प्रमाणित गर्‍यो कि यसले आक्रामक भेन्टिलेसन वा मृत्युको जोखिमलाई कम गर्न सक्छ। यस कारणका लागि, यूएस फूड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन र विश्व स्वास्थ्य संगठन दुबैले COVID-19 बिरामीहरूको उपचारको लागि टोसिलिजुमाबको लागि आपतकालीन प्रयोग प्राधिकरण जारी गरेका छन्। यस व्याख्यानमा, डा. किशिमोतोले हामीलाई IL-6 मा आफ्नो टोलीको नेतृत्वमा विगत 50 वर्षमा गरेको अनुसन्धानको विस्तृत सिंहावलोकन दिनुभयो। यो एक यात्रा थियो जसले तिनीहरूलाई आधारभूत अनुसन्धानबाट औषधि विकास र क्लिनिकल अनुप्रयोगमा लग्यो।
बायोफार्मास्युटिकल साइन्समा २०२० ताङ पुरस्कार विजेताहरूका यी तीन व्याख्यानहरू नोभेम्बर २७ मा बेलुका ४ बजेदेखि ७ बजे (GMT+2020) सम्म ताङ प्राइज युट्युब च्यानलमा प्रिमियर हुनेछन्।